Sidee Musharaxiinta Madaxweyne U Isticmaalayaan Suuqgeynta Emailka | Martech Zone
Khamiis, Juun 30, 2016 Khamiis, Juun 28, 2016 Douglas Karr
Dhowr doorasho ka hor, waxaan ku qaldamay in aan maqaallo siyaasadeed ku soo qoro balooggan. Waxaan jeexjeexay buul gees ah oo waxaan ka maqlay bilo kadib. Kani ma aha blog siyaasadeed, waa blog suuq geyn ah, marka faallooyinkayga ayaan iskaga ilaalin doonaa. Waad i soo raaci kartaa Facebook si aad u aragto rashka. Taasi waxay tiri, suuqgeyntu waa aasaaska gabi ahaanba olole kasta.
Ololahan waxaan ku aragnaa Donald Trump oo u ruxaya eeyga warbaahinta caadiga ah sida xirfadle run ah. Sannado badan ayuu isha ku hayey wuuna fahmay sida dadka looga dhaadhiciyo isaga. Shaki kuma jirona in la shaqeeyay maadaama inta kale ee musharrixiinta Jamhuuriga ay dhammaantood dhinac u dhaceen. In kasta oo taasi dhisayso sumcad-darro, haddana kuma guuleysan karto isaga ololaha.
Emailku wuxuu noqday iridjoogaha aqoonsigeenna internetka. Ka fikir sidan, imisa nooc iyo adeeg ayaan iska diiwaangelinnaa adoo galinaya emaylkeena? Tani waxay samaysay emayl, haddii si sax ah loo isticmaalo, mid ka mid ah aaladaha suuqgeynta ugu wax ku oolka badan ee warshado kasta, sida muuqata si muuqata uga muuqata xogta sahankeenna. Dad badan si kastaba ha noqotee, arrimahan ayaa sidoo kale ka dhigay emaylka waqti lumis iyo jahwareer abaabul. Tani waa sababta aan u abuurnay Boostada Alto, si looga caawiyo dadka isticmaala emaylka inay si fudud u maareeyaan ulana socdaan dhammaan sanduuqyadooda. Marcel Becker, Agaasimaha Wax soo saarka AOL
Waxaan horeyba u aragnay in yar oo doorashooyin ah oo ka dhacaya halka hore ee suuq geynta dijitaalka ay runti ahayd waxa muhiimka ah. Muddadiisii ​​ugu horreysay, kooxda Madaxweyne Obama waxay qabteen ciyaar dhulka ah oo dhistay xog-ururintii ugu ballaadhnayd ee deeq-bixiyeyaasha iyo tallaabooyinka siyaasadeed ee taariikhda. Kooxda ololaha Bernie Sanders ayaa si cad u raacay tusaalahiisa. In kasta oo Sanders aanu ku guuleysan doonin doorashada hordhaca ah, xog-ururintiisa deeq-bixiyeyaasha ayaa soo saartay lacag aad u tiro badan, dhammaantoodna waxaa ku jira koror yar. Wuxuuna sameeyay tan intii ay Hillary Clinton marin u laheyd keydka Dimuqraadiga in muddo ah ka hor inta uusan xisbigu ka tanaasulin xukunka labada musharax.
Waxyaabaha Muhiimka Ah ee Isticmaalka Emailka Musharaxa Madaxweynaha
Hillary Clinton ayaa hogaamineysa liiska diiwaangelinta emaylka. 46% ka mid ah jawaab bixiyaasha ayaa iska diiwaan galiyay ololaha emailada Hillary Clinton vs 39% Bernie Sanders iyo 22% Donald Trump.
Emailka ayaa ugu horeyn loo isticmaalay lacag kor u. In ka badan kalabar emayllada ololaha musharraxiinta (57%) waxay diiradda saareen ugu horreyn ku-deeqidda. 59% jawaabeyaasha soo tabiyay inay ugu deeqeen ololaha Hillary Clinton ayaa lagu qanciyay inay ku sameeyaan email ahaan, marka la barbar dhigo kaliya 19% taageerayaasha Donald Trump.
Emailka iyo Warbaahinta Bulshadu waa kuwa ugu soo dhaweynta badan kanaalada suuqgeynta, Jawaab bixiyaashu waxay soo sheegaan emayl (18%) iyo baraha bulshada (19%) oo ah habka ay doorbidaan si ay u helaan macluumaadka ololaha.
Waa doorasho xiisa leh marka laga eego dhanka suuq geynta. Inkasta oo heerarka oggolaanshuhu ay xun yihiin oo musharrixiintu u muuqdaan inay ka cararayaan boosaska dhexe, heerarka jawaabta ee loo maro dhexdhexaadinta dhaqanka iyo dijitaalka ayaa ka baxsan shaxda. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko saameynta ay leedahay mid kasta oo ka mid ah cayaaraha suuqgeynta musharraxa bisha Nofeembar. Alto Mail ayaa la isku keenay sawirkan ku saabsan xogta.
Tags: sandarada bernieDonald Trumpdeeqodoorashadahillary clintonlacagficil siyaasadeeddeeqaha siyaasadeedMadaxweynahadoorashada madaxweynaha